कस्तो जीवनशैली अपनाउँदा मुटु रोगको जोखिम हुँदैन ?
मुटुसँग सम्बन्धित समस्या बढ्दो छ । कतिपय कलिलो उमेरमै मुटु रोगबाट ग्रसित छन् भने कति हृदयघातको शिकार भएका छन् । मुटुको समस्या र हृदयघातको घटना दिनहुँ बढ्दो छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक रुपान्तरणको लागि तपाईंको कामुकताले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । हर्माेनको स्तरमा आउने गिरावटले न्यूरोलोजिकल र परिसञ्चरणको काममा ठूलो असर गर्ने गर्छ ।
यौन चाहना बढाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् घरेलु उपाय
वृद्ध अवस्थामा यौन दुर्बतलता हुन सामान्य नै हो । तर, युवा अवस्थामा नै यौन दुर्बलता हुनु भनेको एक समस्या नै हो । सेक्स प्राणीको प्राकृतिक आवश्यकता हो ।
उमेरले ३० कटेका अधिकाशं युवामा अहिलेको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो कपाल झर्नु । यसरी जवानी मै कपाल झरेपछि पुरुषकालागि यो ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नवजात शिशुको लागि ख्याल राख्नैपर्ने केही कुरा
नव दम्पती हुनुहुन्छ र पहिलो सन्तान हुर्काउदै हुनुहुन्छ भने, धेरै कुरामा तपाईंहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्छ । शिशुलाई कसरी स्तनपान गराउने, कसरी नुहाइदिने, कसरी दिसा–पिसाब गरेको थाहा पाउने ?
कान बन्द भएको छ ? यस्ता छन् घरेलु उपाय
कान शरीरको महत्त्वपूर्ण अंगहरू मध्ये एक हो । जब कुनै कुरा लगाताररुपमा कानमा जम्मा हुन थाल्छ त्यसपछि कान बन्द हुने गर्दछ । कानको भित्री भागमा रहेका पातलो ट्यूबहरूमा जलन, सूजन, इयरवाक्स र कानको संक्रमणक...
के तपाईंको यौन जीवन दिक्दारिलो र तनावमा बितिरहेको छ ? त्यसो भएको छ भने पार्टनरको मुडको प्रतीक्षा गर्नुको सट्टामा प्रेमको नयाँ आयाम भरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि तल केही टिप्सहरु उल्ल...
शरीरको गन्ध-जब हाम्रो पाचन यन्त्र खराब हुन्छ वा खाएको पच्दैन तब शरीरमा विषाक्त पदार्थ जम्मा हुन्छ । यस्तो कुरा कसरी पनि थाहा पाइन्छ भने, शरीर दुर्गन्धित हुन्छ । पसिना वा शरीरको कुनै भाग दुर्गन्धित हुन...
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ(एनआरएनए) हङकङले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ स्थित सार्दिखोला स्वास्थ्य चौकीलाई दुई थान अक्सिजन कन्सनट्रेटर उपलब्ध गराएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको तेस्रो लहर आउनसक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो...
थाइराइड नियन्त्रण गर्ने यस्ता छन् घरेलु उपायहरु
थाइराइडका रोगीको संख्या पछिल्ला दिनमा बढीरहेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । थाइराइडको समस्या अहिले नेपाली समुदायमा देखिएको प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एक हो । थाइराइड रोग होइन।
प्याज खानुका यस्ता छन् फाइदाहरु
प्याज तरकारीरसब्जी आदिमा हालिने मसलाको रूपमा प्रयोग गरिने मसला फल जो माटोमुनि फल्छ। प्रायः सबै ठाउँमा यो मसलाको उत्पादन हुन्छ।
भोक लागेपछि मात्र खाना खानुस्, यस्ता छन् फाइदाहरु
ब्यस्त जीवनशैलीले गर्दा आजकाल शरिरको आवश्यकताका लागि भन्दा पनि समयका लागि खाना खाने भएका छौं ।
मोबाइल र कम्प्युटरको स्क्रिनमा बस्नेलाई ‘ड्राइ आइ’ को स...
कोरोना संक्रमितको अनुहारमा गम्भीर समस्या